Semalt को साथ तपाइँको SEO शब्दावली सुधार गर्नुहोस्
Semalt को साथ तपाइँको SEO शब्दावली को कसरी सुधार गर्ने?
डिजिटल दुनिया मा, एक शब्द अक्सर आउँछ SEO आउँछ (खोज इञ्जिन अनुकूलन)। यसको बारेमा सुन्नको बावजुद, तिनीहरू मध्ये धेरैलाई समान SEO ज्ञान छैन।
एसईओ ज्ञानको आधारमा एकसँग स्वामित्व हुन्छ, तपाईं व्यक्तिहरूलाई दुई कोटीहरूमा विभाजन गर्न सक्नुहुन्छ - एसईओ विशेषज्ञहरू र एसईओ नोभिसहरू।
हामी भन्न सक्दछौं कि लगभग SEO को बारे मा सबै कुरा को लागी परिचित व्यक्ति SEO SEO भनिन्छ। र, कम एसईओ ज्ञान भएका व्यक्तिहरू वा खोज इञ्जिन अप्टिमाइजेसनको अवधारणा र बारीकाहरूको बारेमा बढी सिक्ने आशा राखेका एसईओ नौसिखाहरू हुन्।
चाहे तपाईं एक विशेषज्ञ वा नौसिखिए हो, तपाईं कुनै पनि समयमा आफ्नो एसईओ शब्दावली सुधार गरी तपाईंको एसईओ ज्ञान बृद्धि गर्न सक्नुहुन्छ। यो तपाइँलाई सधैं अरूको अगाडि राख्नेछ।
SEO शब्दावलीको अलावा, Semalt शब्दले तपाईंको ध्यान खिचेको हुन सक्छ। यदि तपाईं मध्ये कसैलाई यसको बारेमा थाहा छैन भने, यसको संक्षिप्त परिचय यहाँ छ।
Semalt डिजिटल संसारमा सफलता प्राप्त गर्न एक पूर्ण समाधान हो। यस डिजिटल मार्केटिंग एजेन्सीले वेबसाइट विकासबाट वेब प्रबन्धनदेखि लिएर खोज इञ्जिन अनुकूलनसम्म सबै काम गर्दछ, कुनै अनलाइन व्यवसायलाई यसको पहुँच, ग्राहकहरू, र नाफा बढाउन मद्दत गर्न।
Semalt यसको वेबसाइट एसईओ पदोन्नति सेवा को लागी विश्व प्रसिद्ध छ। Semalt मा एसईओ ईन्जिनियरहरू पूरा वेबसाइट अप्टिमाइजेसन गर्दछ र यो निश्चित गर्दछ कि यो Google रँकिंगमा सबैभन्दा माथि छ, धेरै संख्यामा आगन्तुकहरू पाउँछन्, र अधिक राजस्व उत्पन्न गर्दछ।
यी शब्दावली र स्पष्टीकरणको साथ, SEO अब तपाईंको लागि विदेशी विषय हुनेछैन। आउनुहोस् Semalt ले तपाईंको SEO ज्ञान बढाउनु पर्छ।
जब तपाईं वेबसाइट वा वेबपृष्ठमा जानुहुन्छ तर तत्काल फरक URL भएको अर्को पृष्ठमा निर्देशित हुन्छ, यो पुनः निर्देशन भनिन्छ। यो स्थायी वा अस्थायी हुन सक्छ।
1०१ पुनःनिर्देशन एक स्थायी प्रकारको सर्भर रीडाइरेक्शन हो। यसले खोज इञ्जिनहरूलाई बताउँछ कि एक विशिष्ट वेबपेज वा वेबसाइट स्थायी रूपमा नयाँ ठेगानामा सारिएको छ।
हाइपरलिked्क गरिएको पाठ SEO उद्योगमा ए industry्कर पाठको रूपमा परिचित छ। यो एसईओहरू द्वारा प्रयोग गरिएको छ किनभने कुञ्जी शब्दहरूमा धनी एन्कर पाठले वेबसाइट वा वेबपेजको श्रेणी बढाउन मद्दत गर्दछ।
एch्कर पाठले आन्तरिक वा बाह्य लिंकहरू समावेश गर्न सक्दछ। तपाईले ब्ल्ग पोष्ट, लेख, वा प्रेस विज्ञप्तिमा लch्कर पाठ राख्नु भए पनि निश्चित गर्नुहोस् कि ती प्राकृतिक रूपमा देखा पर्दछ।
एड्वर्ड्स गुगलबाट भुक्तान प्रति क्लिक (पीपीसी) विज्ञापन कार्यक्रम हो। यसले विज्ञापनदाताहरूलाई गुगल खोजी नेटवर्क वा गुगल प्रदर्शन नेटवर्क मार्फत उनीहरूको लक्षित श्रोताको पहुँच पुर्‍याउँछ।
लि्कहरू संरचनाहरू हुन् जुन दुई वेबसाइटहरू वा वेबपृष्ठहरू बीचको जडान दर्साउँछ। SEO प्रकारको दुई प्रकारका लिंकहरू अवस्थित छन् - आन्तरिक र बाह्य।
एक आन्तरिक लिंक भनेको समान वेबसाइटको दुई फरक पृष्ठहरूका बीचमा हुने जडान हो, जबकि बाह्य लि link्क भनेको वेबसाइटबाट आउने/जाने जडान हो।
खोज इन्जिनहरूका डाटाबेसमा साइट समावेश गर्ने विधि। एक साइट धेरै तरीकाहरूमा अनुक्रमित हुन सक्छ। वेबसाइट अनुक्रमणिका लागि, तपाईंले अन्य महत्वपूर्ण वेबसाईटहरूबाट उच्च-गुणवत्ता लि links्कहरू लिनुपर्दछ। खोजी ईन्जिन बट्सले याद गर्नेछ र यसलाई अनुसरण गर्न सुरू गर्दछ।
SERP खोज ईन्जिन परिणाम पृष्ठ हो। जब तपाइँ खोजी ईन्जिनहरूमा खोजी सुरू गर्नुहुन्छ, पृष्ठ तपाइँको खोज क्वेरीसँग सम्बन्धित सन्दर्भको साथ देखा पर्दछ SERP।
यो प्राय: प्रयोग हुने एसईओ सर्तहरू मध्ये एक हो। जैविक परिणामहरूको साथसाथै, एक SERP ले खोज क्वेरीमा विज्ञापन गरिएको सन्दर्भहरू समावेश गर्दछ।
Alt गुणको रूपमा पनि चिनिन्छ, यो छविहरूको लागि वैकल्पिक पाठ निर्दिष्ट गर्न प्रयोग गरिन्छ। HTML मा, यो छवि ट्यागको साथ जोडिएको छ।
किनकि यसले छविको वर्णन समावेश गर्दछ, Alt ट्यागले खोज इञ्जिनहरू र स्क्रिन पाठकहरूलाई छविको प्रसंग बुझ्न मद्दत गर्दछ। सामान्यतया, किवर्ड छविहरूको Alt ट्यागमा प्रयोग गरिन्छ किनभने त्यसो गर्दा तिनीहरूलाई खोजी ईन्जिनको छवि खोजी परिणामहरूको लागि अनुकूलित गर्दछ।
कीवर्ड एक धेरै सामान्य SEO सर्त हो। यो एक शब्द, वाक्यांश, वा शब्दहरूको सेट हो उदाहरणको लागि व्यवसाय, ब्रान्ड, जानकारीको टुक्रा, इत्यादि।
कुञ्जी शब्दहरूले खोज ईन्जिन र प्रयोगकर्ताहरूलाई वेबपृष्ठ र यसको सामग्री राम्रो तरीकाले पहिचान गर्न मद्दत गर्दछ। हेडलाइन्स, शीर्षक ट्याग, र सामग्रीमा सही कुञ्जी शब्दहरूको प्रयोगले वेबसाइटको स्तर बढावा दिन सक्छ। जे होस्, अत्यधिक प्रयोगशब्दहरूले वेबसाइटको श्रेणीलाई चोट पुर्‍याउँछ।
केहि वेबसाइटहरूमा नक्कल सामग्री खोज इन्जिन भ्रमित गर्दछ। परिणाममा कुन कुन प्रदर्शन गर्ने भनेर उनीहरू बुझ्दैनन्।
यो भ्रम हटाउनको लागि, तपाईं सक्कली छनौट गर्न सक्नुहुनेछ र यसलाई क्यानोनिकल यूआरएल (क्यानोनिकल ट्याग) को रूपमा सेट गर्नुहोस्। सबै अन्य पृष्ठहरू यसमा औंल्याउनु पर्छ।
HTML शीर्षकमा <title> को रूपमा चिन्हित, शीर्षक ट्यागले पृष्ठको शीर्षक प्रतिनिधित्व गर्दछ। तपाइँ यसलाई तपाइँको ब्राउजरको ट्याबहरू वा खोज परिणामको हेडलाइहरूमा पहिचान गर्न सक्नुहुनेछ।
शीर्षक ट्यागले खोज इञ्जिनहरूलाई मद्दत गर्दछ, साथै प्रयोगकर्ताहरू, वेबसाइट वा वेबपृष्ठको प्रस context्ग पहिचान गर्न। उत्तम परिणामहरूका लागि शीर्षकहरू सिर्जना गर्नुहोस् जुन वेबपृष्ठमा उल्लेखनीय र सान्दर्भिक छन्।
क्रोलर एक प्रोग्रामलाई दिइएको नाम हो जुन कोड/सामग्री विश्लेषण गर्न साइट वा इन्टरनेट मार्फत सर्छ वा क्रल हुन्छ। क्रलरले आन्तरिक र बाह्य लिंकहरू पछ्याएर त्यसो गर्दछ।
मेटा विवरण एक वेबसाईट वा वेबपृष्ठ को सामग्री को बारे मा अधिकतम 160 वर्ण को एक संक्षिप्त विवरण हो। यसले प्रयोगकर्ताहरूलाई त्यो साइट वा पृष्ठ भ्रमण गर्न कारण दिन्छ।
तपाई सजीलै खोज परिणाम पृष्ठमा मेटा विवरण फेला पार्न सक्नुहुन्छ। यो पृष्ठको शीर्षक तलको पाठ हो।
CSS, क्यास्केडि Style्ग शैली पानाहरू, HTML HTML कागजातको उपस्थिति परिभाषित गर्नको लागि प्रयोग गरिएको भाषा हो। प्रत्येक वेबसाइटमा कम्तिमा एउटा सीएसएस फाइल समावेश छ जुन प्रत्येक तत्वको रूपरेखा, आकार, रंग, र अन्य चीजहरू निर्धारण गर्दछ।
बाउन्स रेट भनेको एक साइटको भ्रमण गर्ने र साइटको कुनै लिंक वा थप पृष्ठहरू क्लिक नगरी यसलाई तुरुन्त छोड्ने प्रतिशत प्रतिशत हो।
जाभास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग भाषा हो जुन वेबमास्टर्सले प्रयोग गर्न वा वेबसाइटको सामग्रीमा विशेष प्रभावहरू थप्न प्रयोग गर्दछ। जाभास्क्रिप्टको ठूलो आकारले वेबपृष्ठको लोड समय मात्र बढाउँदैन तर क्रॉलरहरूलाई वेबपृष्ठको माध्यमबाट क्रल गर्न र इन्डेक्स गर्न पनि गाह्रो बनाउँदछ।
सामग्री वेबपृष्ठको मुटु हो किनकि यसले पदार्थ प्रदान गर्दछ र प्रयोगकर्ताको रुचि उत्पन्न गर्दछ। सामग्रीको केहि सामान्य रूपहरू शब्दहरू, चित्रहरू/छविहरू, GIFs, ध्वनिहरू, र भिडियोहरू हुन्।
सामग्री सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण क्रमबद्ध कारकहरू मध्ये एक हो। जब सामग्री जानकारीमूलक, उपयोगी, मूल्यवान, अनौंठो, आकर्षक, र विश्वसनीय छ, खोज ईन्जिनले इनाम दिन्छ।
वेबसाइट वा वेबपृष्ठ पूर्ण रूपमा लोड हुन लिने समयलाई पृष्ठ गति भनिन्छ। यो पनि एक महत्वपूर्ण क्रमबद्ध कारक हो।
क्लिक-थ्रु रेट (CTR) कार्बनिक खोज परिणामहरूमा क्लिकको दर हो। कुल गणनामा समग्र जैविक क्लिकहरू विभाजन गरेर र १०० सँग परिणाम गुणा गरेर तपाईं यसको गणना गर्न सक्नुहुन्छ।
यो एक खोज ट्याग हो जुन खोज ईन्जिनलाई जानकारी दिन खोज परिणामहरूबाट वेबसाइट वा वेबपृष्ठ हटाउन प्रयोग गरिन्छ।
अर्गानिक खोजी गुगललाई खोज इन्जिन वेबसाइटहरू मार्फत कुञ्जी शब्दहरूको प्रयोग गरेर सुरु गरिएको खोजीलाई दिइएको नाम हो। यस प्रकारको खोजीबाट प्राप्त हुने परिणामहरूलाई जैविक खोजी परिणामहरू भनिन्छ।
यो एक पाठ फाइल हो जुन वेबसाइटको रूट डाइरेक्टरीमा अवस्थित हुन्छ। यस फाईलको उद्देश्य सामग्री नियन्त्रण गर्नु र खोजी ईन्जिनहरूलाई थाहा दिनुहोस् वेबसाइटको कुन क्षेत्रहरूमा उनीहरूले पहुँच गर्नुपर्दैन।
ट्राफिक एक वेबसाइट भ्रमण गर्ने व्यक्तिको संख्या हो। कहिलेकाँही बोटहरूले ट्राफिकमा पनि जोड दिन्छ।
वेबपृष्ठ भित्रका सबै गतिविधिहरूलाई खोजी ईन्जिनहरूको अनुरूप अनुकूलित गर्नका लागि गरिएको अन-पृष्ठ एसईओ भनिन्छ। यसले एचटीएमएल कोड (मेटा ट्यागहरू, शीर्षक ट्यागहरू, इत्यादि), यूआरएल संरचना, सूचना आर्किटेक्ट, र वेबसाइट नेविगेशनको अनुकूलनको साथ उच्च-गुणवत्ता, सान्दर्भिक सामग्री सिर्जना र प्रकाशन समावेश गर्दछ।
यो एक यूआरएल बाट अर्को URL मा एक उपयोगकर्ता को पुनर्निर्देशन को विधि हो। उदाहरण को लागी, जब एक वेबसाइट एक नया डोमेन प्राप्त हुन्छ, पुरानो डोमेन प्रयोगकर्ताहरु लाई नया मा रिडिरेक्ट गर्दछ।
यो एक प्रकारको मेटाडेटा हो जुन प्राय: वेबसाइटको HTML मा थपिएको विवरण सिर्जना गर्नका लागि थप्दछ। सर्च ईन्जिनहरूले यो जानकारी प्राप्त गर्दा क्रल हुँदा।
के तपाईं कहिल्यै 'रिच स्निपेट्स' शब्द भेट्नुभयो? हो, ती खोजी परिणामहरूमा देखा पर्दैछन्। एक धनी स्निपेट स्कीमा बाहेक अरू केहि छैन।
साइटम्याप केवल वेबसाइटको पृष्ठहरूको सूची हो। जब कुनै वेबसाइटमा धेरै पृष्ठहरू हुन्छन्, साइटम्यापले प्रयोगकर्ताहरूलाई सजिलै साइटमा नेभिगेट गर्न मद्दत गर्दछ।
साइटम्याप दुई प्रकारका हुन्छन् - HTML र XML। HTML साइटम्याप सामान्यतया शीर्षक अनुसार संरचना हुन्छ र प्रयोगकर्ताहरूलाई सजिलै साइट मार्फत नेभिगेट गर्न मद्दत गर्दछ।
एक XML साइटम्याप खोज इन्जिन क्रॉलरहरूको लागि हो र तिनीहरूलाई वेबसाइटमा पृष्ठहरूको सूची प्रदान गर्दछ।
अफ-पृष्ठ SEO मा गतिविधि उत्पन्न गर्दछ जसले माग उत्पन्न गर्छ र ब्राण्ड जागरूकता बढाउँदछ। यी लिंकहरू, सामग्री मार्केटि,, सामाजिक मिडिया मार्केटि,, प्रभावकारी मार्केटि,, ईमेल मार्केटिंग, र अन्य जस्ता वेबपृष्ठ गतिविधिहरू भन्दा बाहिर छन्।
एक प्रकारको वेबसाइट प्रयोगकर्ताको स्क्रिन आकार अनुसार समायोजन गर्न बनाइएको। चाहे तपाइँ यसलाई एक मोबाइल उपकरण वा डेस्कटप मार्फत पहुँच, यो उही अनुभव प्रदान गर्दछ।
आईपी ​​ठेगाना भनेको इन्टरनेट प्रोटोकल ठेगाना हो। यो नेटवर्कको हार्डवेयरको ठेगानाले उही नेटवर्कमा अन्य यन्त्रहरूसँग कम्प्युटर जडान गर्न मद्दत गर्दछ। आईपी ​​ठेगाना सेयर गर्न सकिन्छ (समान ठेगानाहरू साझा गर्ने असंख्य वेबसाइटहरू) वा समर्पित (वेबसाइटको अलग ठेगाना)। समर्पित आईपी ठेगानाले साइटको लोड गति बढाउँदछ।
गुगल संसारको सब भन्दा ठूलो र सबै भन्दा लोकप्रिय खोज ईन्जिन हो संसारका लगभग सबै देशहरूमा।
त्यसो भए एसईओसँग व्यवहार गर्दा यी सबै भन्दा धेरै प्रयोग हुने सर्तहरू हुन्। यी सर्तहरूसँग परिचित हुनाले तपाईंको एसईओ ज्ञान बढ्छ र तपाईंको आत्मविश्वास बढ्छ।
नोट गर्नुहोस् कि यो SEO सर्तहरूको एक बढ्दो बढ्दो ज्ञान आधार हो। तपाइँ Semalt को साथ तपाइँको SEO शब्दावली सुधार गर्न फिर्ता आउन जारी राख्न सक्नुहुन्छ।